नेपालका लागि भोली भारतसँगको खेल ‘गर वा मर’ ! | Hamro Khelkud
नेपालका लागि भोली भारतसँगको खेल ‘गर वा मर’ !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालका लागि साफ यु १५ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा मंगलबारको खेल गर वा मरको अवस्थामा रहेको छ । पहिलो खेलमा लज्जास्पद हार बेहोरेको नेपालले भारतसँगको खेल गुमाएमा टोलीको यात्रा राउन्ड रोविन मै टुंगिन सक्छ ।
अभ्यासका क्रममा नेपाली टोली । तस्बिर सौजन्य: एनएसजेएफ
पहिलो खेलमा लज्जास्पद हार आयोजक बंगलादेशसँग ६–० को हारपछि नेपाली टोलीमाथि दबाब छ । फाइनल पुग्ने सम्भावनालाई जीवित राख्न पनि नेपाललाई भारतविरुद्धको खेल महत्वपूर्ण रहेको छ । बंगलादेशसँगकाो खेलमा भारतविरुद्ध अलग रणनीति बनाउने प्रशिक्षक गंगा गुरुङले बताइन् । उनले मिडफिल्डमा देखिएको समन्वय अभावमा सुधारको प्रयासका साथै रक्षापक्तिलाई मजबुद बनाउने बताइन् ।
ढाकास्थित वीरश्रेष्ठ शहिद सिपाही मोहम्मद मुस्ताफा कमल रंगशालामा नेपाल र भारतबीचको खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो २ः१५ मा सुरु हुनेछ । आज नेपाली टोलीले २ घन्टा अभ्यास गरेको थियो । चार टोलीको सहभागिता रहेको च्याम्यिनसिपमा राउन्ड रोविन खेलपछि शीर्ष २ टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
भारतले पहिलो खेलमा भुटानलाई ३–० ले हराइसकेको छ । नेपालले पुस ६ गते भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । पहिलो खेल जित्दै बंगलादेश र भारतले फाइनल पुग्ने सम्भावनालाई बलियो बताइसकेका छन् ।